प्रचण्डले जनतालाई ताजमहल र हाउडाको पुल देखाएः केपी ओली « Pahilo News
प्रचण्डले जनतालाई ताजमहल र हाउडाको पुल देखाएः केपी ओली
प्रकाशित मिति :9September, 2016 6:01 pm
२४ भदौ । नेकपा (एमाले) अध्यक्ष एवम् पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रधानमनत्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले बिहीबार व्यवस्थापिका–संसदमा गरेको सम्बोधनलाई भारतीयहरुले बाकसमा देखाउँने चटकी जस्तो मात्र भएको आरोप लगाएका छन् ।
एमाले केन्द्रीय युवा तथा खेलकुद विभागले शुक्रबार राजधानीमा आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उनले यस्तो आरोप लगाएका हुन् । ‘म सानो हुँदा भारतीयहरुले एउटा सानो बाकसमा ल्याउँथेँ । चारआना तिर्नुपथ्र्यो । हाउडाका पुल देखो, आगरा का ताजमहल देखो भन्दै फिट्कि–फिट्क घुमाउथ्यो,’ ओलीले प्रचण्डको सम्बोधनप्रति संकेत गर्दै भने ‘प्रधानमन्त्रीले भाषण गर्दा आगरा देखो, ताजमहल देखो जस्तै गर्नुभयो । उहाँले जनताले के चाहेका छन् त्यो भन्नुभएनन् ।’
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सम्बोधनमा भारत भ्रमण, चीनका राष्ट्रपतिले गर्ने नेपाल भ्रमण, फाष्टट्याक, हुलाकी राजमार्ग कसले निर्माण गर्ने, आर्थिक सम्बृद्धि केहीका बारेमा पनि नबोलेको आरोप पनि ओलीले लगाए ।
‘उहाँले आफू प्रधानमन्त्री भएको एक महिना र केही दिनमा भाषण गर्नुभयो,’ ओलीले भने ‘के गर्नुभयो के गर्नुभयो भरे केही पनि गर्नुभएन । उही लडाकुलाई पैसा दिन्छु भन्नुभयो, त्यत्ति हो ।’ प्रचण्डले देशका समस्याका बारेमा केही पनि नबोलेको ओलीले दाबी गर्नुभयो ।
अरुका एजेण्डाको भारी बोकेर सहमति हुँदैन
ओलीले अरुका एजेण्डको भारी बोकेर सहमति नखोज्न प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई आग्रह गरे । ‘अरुका एजेण्डको नाम्लो चुडिने गरी भारी बोकेर संविधान संशोधनका कुरा गर्ने अनि कसरी सहमति हुन्छ ?’ ओलीले प्रश्न गरे ।
राष्ट्र र राष्ट्रियता पहिलो
ओलीले अरुका एजेण्डाको भारी बोकेर होइन राष्ट्रियतालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको अवस्थामा मात्र सहमति संभव हुने सुझाव दिए । ‘नेशन फर्स्ट, राष्ट्रलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको अवस्थामा मात्र सहमति हुन्छ,’ उनले भने ‘अहिले भन्यो भने कुटनीतिक मर्यादा भएन भन्छन् । पुराणहरुमा आउँछ नि शिवजीले जट्टा फुत्त निकाले र उफार्दा एउटा नन्दी बुरुक्क उफ्रिन्छ । अर्को भृङ्गी फुत्त उफ्रिन्छ । अनेक जट्टा प्mयालेर नन्दी भृङ्गी उफारेर सहमति हुँदैन ।’
अर्काको जोडजामको बहुमतले नउफ्रिए हुन्छ
ओलीले कांग्रेस–माओवादी गठबन्धनको सरकार अर्काको जोडजामले पुगेको बहुमतको संज्ञा दिए । ‘अर्काले जोडजाम गरिदिएको बहुमतका भरमा नउफ्रिए हुन्छ,’ उनले भने ‘अहिले थैथै गर्दै बहुमत पुर्याउनेहरुले पनि बुझिराख्नु ०७४ माघपछि उनीहरुको बस्ने ठाउँ कहाँ हो त्यसैबेला थाहा हुन्छ ।’
मधेसका मसीयाहरुलाई प्रश्न ?
ओलीले मधेसका केही मसीयाहरुले एमालेलाई मधेस विरोधीको संज्ञा दिएको भन्दै उनीहरुलाई सही ठाउँमा बस्न आग्रह गरे । ‘म मधेसका मसीयाहरुलाई सोध्न चाहन्छु,’ उनले भने ‘आफ्नो बर्चश्वका लागि तपाईँहरुले तराई–मधेसका जनतालाई नउफार्नुहोला । एमाले मधेसका पक्षमा छ ।’ ओलीले मधेसमा एमाले आयो भने एमालेको लहर आउँछ भनेर अत्तालिएको पनि आरोप लगाए ।
‘अहिले केपी ओली मधेस विरोधी, कडा मधेस विरोधी भनेर हल्ला गरिएको छ,’ ओलीले भने, ‘जसले तराईमा सिंचाईको योजनाहरु ल्यायो, जसले मधेसमा बाटा बनाउने बजेट छुट्यायो । जसले मधेसमा सहरीकरणका लागि बजेट छुट्याएको छ । जसले रेल मार्गको योजना अघि सारेको छ ऊ मेधस विराधी ?’ उनले घरको इनार छुन नदिने महीसाहरु मधेस विरोधी भएको अरोप लगाए ।
‘जसले पल्लो घरको मान्छेलाई आफ्नो घरको इनार छुन दिदैँन, उनीहरुलाई हेपेर राख्छ,’ ओलीले भने, ‘कम्तीमा मधेसका दलितलाई घर भित्र लगेर राख्ने आँट गर्न सक्छौँ ? मेरो मधेसका महीसालाई प्रश्न छ ।’